ယောရှုသည် 15 (သမ္မာကျမ်း၊၊ Judson (1835))České uživatelské rozhraní
1 ယုဒယုဒအမျိုးသားသားတို့သည် စာရေးစာရေးတံပြု၍ အဆွေ အမျိုးအလိုက် အမွေခံရသောမြေဟူမူကား၊ တောင်တောင်မျက် နှာ၌ ဧဒုံဧဒုံပြည်နယ်နှင့် နီးစပ်လျက်၊ တေမန်ပြည်စွန်းမှ စ၍ ဇိနတောဖြစ်သော၊
2 တောင်ဘက်တောင်ဘက်အပိုင်းအခြားသည် သောဒုံအိုင်၌ တောင်တောင်အကွေ့မှထွက်၍၊
3 တောင်တောင်မျက်နှာနား၊ အကရဗ္ဗိမ်ကုန်းကို ရှောက် လျက် ဇိနရွာသို့ ရောက်လေ၏။ တဖန် တောင်တောင်မျက်နှာ နား၊ ကာဒေရှဗာနာရွာ၊ ဟေဇရုန်ရွာ၊ အာဒါရွာ၊ ကာကာ ရွာ၊
4 အဇမုန်ရွာကို ရှောက်သဖြင့် အဲဂုတ္တုချောင်းချောင်းသို့ လိုက်၍ ပင်လယ်ပင်လယ်၌ ဆုံးလေ၏။
5 အရှေ့ဘက်ဘက်၌ သောဒုံအိုင်သည် ယော်ဒန်မြစ်ယော်ဒန်မြစ်ဝ တိုင်အောင် အရှေ့အပိုင်းအခြားဖြစ်၏။ မြောက်ဘက်မြောက်ဘက် အပိုင်းအခြားသည် ယော်ဒန်မြစ်ယော်ဒန်မြစ်သို့ဆင်းရာ သောဒုံအိုင် ကွေ့မှ ထွက်၍၊
6 ဗေသောဂလရွာသို့၎င်း၊ ဗေသရာဗရွာ မြောက် နားမှာရှောက်လျက် ရုဗင်ရုဗင်သားသားဗောဟန်၏ ကျောက်သို့ ၎င်း ရောက်လေ၏။
7 အာခေါ်ချိုင့်မြောက်ဘက်မြောက်ဘက်မှထွက်၍ ဒေဗိရရွာ သို့၎င်း၊ မြစ်မြစ်တောင်ဘက်တောင်ဘက် အဒုမ္မိမ်ကုန်းရှေ့၌ရှိသော ဂိလဂါလဂိလဂါလမြို့သို့၎င်း ရေရောက်ပြီးမှ၊ အင်ရှေမက်အိုင်၊ အင်္ရေရော ဂေလရွာလမ်းသို့ လိုက်လျက်၊
8 ဟိန္နုံသားသား၏ချိုင့်နား ယေရုရှလင်မြို့ယေရုရှလင်မြို့ရာရာ ယေဗု သိအရပ် တောင်ဘက်တောင်ဘက်နားမှာရှောက်၍ ဟိန္နုံချိုင့်အ နောက်၊ ရေဖိမ်ရေဖိမ်ချိုင့်မြောက်ဘက်မြောက်ဘက်၌ရှိသော တောင်တောင်ပေါ်သို့ တက်လေ၏။
9 ထိုတောင်တောင်ပေါ်မှဆင်းပြန်၍၊ နေဖတောစမ်းရေစမ်းရေ တွင်းကို ရှောက်သဖြင့် ဧဖရုန်ဧဖရုန်တောင်တောင်နှင့်ဆိုင်သော မြို့မြို့ များသို့၎င်း၊ ကိရယတ်ယာရိမ်မြို့မြို့ ရာဗာလာမြို့မြို့သို့၎င်း၊
10 ဗာလာမြို့အနောက်ဘက်ဘက်နားမှာ ရှောက်လျက် စိရစိရတောင်တောင်သို့၎င်း၊ ခေသလုန်တောင်တောင်တည်းဟူသော ယာရိမ်တောင်တောင်မြောက်ဘက်မြောက်ဘက်နားမှာ ရှောက်လျက် ဗက်ရှေ မက်မြို့၊ တိမနာမြို့သို့၎င်း၊
11 ဧကြုန်မြို့မြောက်ဘက်မြောက်ဘက်နားမှာ ရှောက်လျက် ရှိကြုန်ရွာသို့၎င်း၊ ဗာလာတောင်တောင်သို့၎င်း၊ ယာဗနေလရွာသို့ ၎င်း၊ ရောက်၍ ပင်လယ်ပင်လယ်၌ ဆုံးလေ၏။
12 အနောက်ဘက်၌ ပင်လယ်ပင်လယ်ကြီးနှင့် ပင်လယ်ပင်လယ် ကမ်းပါးသည် အနောက်အပိုင်းအခြားဖြစ်၏။ ဤရွေ့ ကား ယုဒယုဒအမျိုးသားသား အဆွေအမျိုးအလိုက် နေရာပြည် နယ်အပိုင်းအခြားဖြစ်သတည်း။
13 ထာဝရဘုရားဘုရားမှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ ယောရှုသည်ယောရှုသည် ယုဒယုဒအမျိုးသားသားတို့တွင် ယေဖုန္န၏သားသား ကာ လက်အဘို့ ဟေဗြုန်မြို့ဟေဗြုန်မြို့တည်းဟူသော အာနကအဘအာ ဘ၏မြို့ကို ချပေးပေးလေ၏။
14 ထိုမြို့ထဲက ကာလက်ကာလက်သည် အာနကသားသားသုံးသုံး ယောက်၊ ရှေရှဲ၊ အဟိမန်၊ တာလမဲတို့ကို နှင်ထုတ်သော နောက်၊
16 ကိရယဿေဖါမြို့ကို တိုက်ယူလုပ်ကြံသောသူ အား ငါသည် သမီးသမီးအာခသကို ပေးပေးစားမည်ဟုဆိုလျှင်၊
17 ကာလက်ကာလက်ညီ ကေနတ်၏သားသား ဩသံယေလ သည် ထိုမြို့ကိုတိုက်ယူ၍ ကာလက်ကာလက်သည် သမီးသမီးအာခသကို သူ့အားပေးပေးစားလေ၏။
18 ထိုမိန်းမသည် ခရီးသွားစဉ်အခါ၊ လယ်တကွက် ကို အဘ၌ တောင်းခြင်းငှါ လင်နှင့်တိုင်ပင်ပြီးမှ မြည်းမြည်းပေါ် ကဆင်းလေ၏။ အဘကာလက်ကာလက်က အဘယ်အလိုရှိသ နည်းဟု မေးလျှင်၊
19 သမီးက ကောင်းကြီးပေးပေးစေချင်ပါ၏။ ကိုယ် တော်သည် တောင်တောင်မျက်နှာအရပ်ကို ပေးပေးပါပြီ။ စမ်းရေရေ တွင်းတို့ကိုလည်း ပေးပေးတော်မူပါဦးဟု တောင်တောင်းသည်အ တိုင်း အဘသည် အထက်စမ်းရေရေတွင်း၊ အောက်စမ်းရေရေ တွင်းတို့ကို ပေးပေးလေ၏။
20 ဤရွေ့ကား၊ ယုဒယုဒအမျိုးသားသား အဆွေအမျိုးအ လိုက် ခံရသောအမွေအမွေမြေ ဖြစ်သတည်း။
21 ယုဒယုဒအမျိုးသားသားပိုင်သော မြို့များမြို့များဟူမူကား၊ ဧဒုံဧဒုံ ပြည်နှင့်နီးစပ်သော တောင်ပိုင်းတောင်ပိုင်း၌ ကပ်ဇေလမြို့မြို့၊ ဧဒေရ မြို့မြို့၊ ယာဂုရမြို့မြို့၊
23 ကေဒေရှမြို့၊ ဟာဇော်ဟာဇော်မြို့၊ ဣသနန်မြို့၊
25 ဟာဇော်ဟာဇော်မြို့သစ်၊ ဟာဇော်ဟာဇော်မြို့ဟောင်းတည်းဟူ သော ဟေဇရုန်မြို့၊
32 လေဗောက်မြို့မြို့၊ ရှိလဟိမ်မြို့မြို့၊ အအိန်မြို့မြို့၊ ရိမ္မုန် မြို့မြို့၊ ရွာနှင့်တကွ မြို့မြို့ပေါင်းကား သုံးဆယ်ခြောက်မြို့မြို့ တည်း။
36 ရှာရိမ်မြို့မြို့၊ အဒိသိမ်မြို့မြို့၊ ဂဒေရမြို့မြို့၊ ဂဒေရော သိမ်မြို့မြို့၊ ရွာနှင့်တကွ မြို့မြို့ပေါင်းကား၊ ဆယ်ငါးမြို့မြို့တည်း။
41 ဂဒေရုတ်မြို့မြို့၊ ဗက်ဒါဂုန်မြို့မြို့၊ နေမမြို့မြို့၊ မက္ကဒါမြို့မြို့၊ ရွာနှင့်တကွ ဆယ်ခြောက်မြို့မြို့တည်း။
44 ကိလမြို့မြို့၊ အောခဇိပ်မြို့မြို့၊ မရေရှမြို့မြို့၊ ရွာနှင့်တကွ ကိုးကိုးမြို့မြို့တည်း။
46 ဧကြုန်မြို့မှစ၍ ပင်လယ်ပင်လယ်တိုင်အောင်၊ အာဇုတ် မြို့နှင့်နီးစပ်သောမြို့ရွာများ၊
47 အာဇအာဇုတ်မြို့နှင့် သူဆိုင်သော မြို့ရွာများ၊ အဲဂုတ္တု မြစ်မြစ်၊ ပင်လယ်ပင်လယ်ကြီး၊ ပင်လယ်ကမ်းပင်လယ်ကမ်းပါးတိုင်အောင်၊ ဂါဇမြို့ နှင့် သူဆိုင်သော မြို့ရွာများ၊
48 တောင်တောင်ပေါ်၌လည်း၊ ရှမိရမြို့၊ ယတ္တိရမြို့၊ စော ခေါမြို့၊
51 ဂေါရှင်ဂေါရှင်မြို့မြို့၊ ဟောလုန်မြို့မြို့၊ ဂိလောမြို့မြို့၊ ရွာနှင့် တကွ ဆယ်တမြို့မြို့တည်း။
54 ဟုန္တမြို့မြို့၊ ဟေဗြုန်မြို့ဟေဗြုန်မြို့တည်းဟူသော ကိရယသာဘ မြို့မြို့၊ ဇိအောရမြို့မြို့၊ ရွာနှင့်တကွ ကိုးကိုးမြို့မြို့တည်း။
55 မောင်မြို့၊ ကရမေလကရမေလမြို့၊ ဇိဖမြို့၊ ယုတ္တမြို့၊
57 ကဣနမြို့မြို့၊ ဂိဘာမြို့မြို့၊ တိမနမြို့မြို့၊ ရွာနှင့်တကွ ဆယ်မြို့မြို့တည်း။
59 မာရပ်မြို့မြို့၊ ဗေသနုတ်မြို့မြို့၊ ဧလတေကုန်မြို့မြို့၊ ရွာ နှင့်တကွခြောက်ခြောက်မြို့မြို့တည်း။
60 ကိရယတ်ယာရိမ်မြို့မြို့တည်းဟူသော ကိရယတ် ဗာလမြို့မြို့၊ ရဗ္ဗာမြို့ရဗ္ဗာမြို့၊ ရွာနှင့်တကွ နှစ်နှစ်မြို့မြို့တည်း။
62 နိဗရှန်မြို့မြို့၊ မေလက်မြို့မြို့၊ အင်္ဂေဒိမြို့မြို့၊ ရွာနှင့်တကွ ခြောက်ခြောက်မြို့မြို့တည်း။
63 ယေရုရှလင်မြို့ယေရုရှလင်မြို့၌နေနေသော ယေဗုသိလူတို့ကို ကား၊ ယုဒယုဒအမျိုးသားသားတို့သည် မနှင်ထုတ်နိုင်ဘဲ သူတို့ သည် ယနေ့နေ့တိုင်အောင် ယုဒယုဒအမျိုးသားသားတို့နှင့်အတူ ယေရုရှလင်မြို့ယေရုရှလင်မြို့၌ နေနေကြသတည်း။
Exploring the Meaning of ယောရှုသည် 15
Joshua 15: Judah’s territory and more about Caleb.
This chapter describes the territory given to the tribe of Judah, and lists many of its cities and borders. Judah receivedamajor portion of the land of Canaan; its eastern border was the Salt Sea (the Dead Sea), and the western border was the Great Sea (the Mediterranean).
Although Judah was the fourth son of Jacob, he playedamore significant role in many of the Old Testament stories than his older brothers did. So, it is not surprising that the tribe of Judah received extensive territory in the south of Canaan, which in later time became the nation of Judah, along with the tribe of Benjamin’s small territory. The name ‘Judah’ also eventually led to the name ‘Jewish’, coming from the Roman province of Judaea. The name ‘Judah’ also means “praise”, specifically praise of God (see Swedenborg’s work, Arcana Caelestia 456).
Praise itself isacommendation ofaperson’s good qualities. To give praise is part of our love for our neighbour; to receive praise underscores our sense of our own value. To praise the Lord is to give thanks to Him, and to affirm the difference that the Lord makes in our life. Ultimately, praise is part of our faith in the Lord to lead us through this life and for eternity.
This uplifting, positive spiritual meaning of Judah does not mean that Judah (the man in the Old Testament) was without faults. He had his flaws, as everyone does, but at times Judah changed the course of events forabetter outcome. It was Judah who persuaded his brothers to sell Joseph rather than kill him, and he also offered himself asahostage for the sake of his brothers (Arcana Caelestia 4815).
Chapter 15 lists very many locations in Judah’s territory. Here are justafew of the places listed, along with their meaning and spiritual significance:
Judah = “praise”
Spiritually = our worship of God
Which includes these, and many more aspects…
Zin = “flat, level ground”
Spiritually = life under God’s guidance
Kadesh Barnea = “holy wanderings”
Spiritually = becoming purified
Beth Hoglah = “house of the partridge”
Spiritually = bringing to birth
En Rogel = “water spring of the foot”
Spiritually = life in everyday activities
Jerusalem = “dwelling place of peace; wholeness”
Spiritually = our highest spiritual state
Nephtoah = “to be open”
Spiritually = to be part of all life
Timnah = “allotted portion”
Spiritually = what the Lord has created me for
Mount Hebron, which was in the territory of Judah, was given to Caleb as an inheritance because of his faithfulness to God. We read in this chapter that he conquers the giants living there, and drives them away from Mount Hebron. Caleb makesapromise that whoever takes the nearby city of Kirjath-sepher will have his daughter, Achsah, forawife. Caleb’s brother’s son, Othniel, captures the city and marries Achsah. Caleb blesses Achsah and gives her springs of water upon her request, and he also gives Othnielafield.
The spiritual meaning of this touching story is that our spiritual life is intended to come together to be likeafamily (Arcana Caelestia 3020), just as Caleb, Achsah and Othniel are all close members ofafamily. Spiritual life is about bringing together our beliefs, our loves and affections, our intentions, and our actions. These different aspects of spiritual life become like one family where everyone – or everything – is interwoven together.